कांग्रेस संसदीय बोर्ड आज बन्दै, कोको पर्नेछन् शक्तिशाली बोर्डमा ? | Samaj Khabar
कांग्रेस संसदीय बोर्ड आज बन्दै, कोको पर्नेछन् शक्तिशाली बोर्डमा ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आज संसदीय बोर्ड गठन गर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समिति र कार्य सम्पादन समितिले दिएको म्याण्डेटका आधारमा सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय बोर्ड गठन गर्न लागेका हुन् । कांग्रेसको विधान अनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्ने प्रयोजनका लागि संसदीय बोर्ड शक्तिशाली मानिन्छ ।
बोर्डमा ६ जना पदाधिकारी स्वतः र अन्य ८ जना सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ । सभापति देउवाले पदाधिकारी मनोनयन गर्न नसकेका कारण अहिले पदाधिकारीका रुपमा देउवा, महामन्त्री डा.शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव बोर्डमा रहने पक्का छ । पदाधिकारीबाहेक ११ जना सदस्य चयन गर्ने र पछि तिनैमध्येबाट पदाधिकारी चयन गर्ने प्रस्ताव सभापति देउवाले गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने पहिले पदाधिकारी मनोनित गरेर बोर्डलाई पूर्णता दिन सुझाव दिएका छन् । सोमबारको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विधान र सबैको भावना समेटेर बोर्ड गठनको जिम्मा देउवालाई दिएको थियो ।
कोको रहनेछन् संसदीय बोर्डमा ?
सभापति देउवा संसदीय बोर्डको आकार बढाउन चाहन्थे । सहमति नजुटेपछि अब १४ सदस्य बोर्ड नै बन्ने सम्भावना छ । देउवाले आफूनिकट नेताहरु विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, पूर्णबहादुर खड्का र बालकृष्ण खाँडलाई बोर्डमा ल्याउन चाहेका छन् । त्यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित उनीनिकट प्रकाशमान सिंह, डा.रामशरण महत र सुजाता कोइराला बोर्डमा पर्ने सम्भावना छ । बोर्डमा पर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौंलालाई समेत सहभागि गराउने तयारी देउवाको छ । महेश आचार्य र बलबहादुर केसीमध्ये १ जना बोर्डमा पर्ने सम्भावना पनि यथावत रहेको छ ।